Degso Construction Simulator 2 APK loogu talagalay Android
Degso Construction Simulator 2
Bilaash Degso loogu talagalay Android (1413.12 MB)
Degso Construction Simulator 2,
Simulator-ka Dhismaha 2 waa jilid dhisme oo aad ku raaxeysan karto ciyaarta haddii aad rabto inaad isticmaasho mashiinno kala duwan oo culus sida kuwa qodda iyo kuwa wax qasa.
In Simulator Construction 2, ciyaar jilitaan ah oo aad ku ciyaari karto taleefannadaada casriga ah iyo kiniiniyada adiga oo adeegsanaya nidaamka hawlgalka Android, waxaa naloo siiyay fursad aan madax uga noqonno shirkadeena dhismaha. Waxaan isku dayeynaa inaan dhisno dhismayaal iyo dhismayaal kala duwan Ameerika annaga oo heleyna qandaraasyo ciyaarta. Mararka qaarkood waxaan dhisnaa dabaqyo dhaadheer, marna waxaan samaynaa waddooyin annagoo ku shubnay laami.
Simulator Construction 2 waa mid ka mid ah cayaaraha jilitaanka ugu macquulsan ee ugu macquulsan ee aad ku ciyaari karto aaladahaaga gacanta. Ciyaarta dhexdeeda, waxaa naloo siiyay fursad aan ku isticmaalno moodooyinka gawaarida dhismaha dhabta ah ee ay soo saareen sumadaha Caterpillar, Liebherr, Palfinger, Bell, STILL iyo ATLAS. Baabuurta aan adeegsan doonno waxaa ka mid ah wiishash, baabuur shub ah, majarafado, dozers iyo rollers.
Markaan dhammaystirno qandaraasyada iyo dhismayaasha Dhismaha Simulator 2, waxaan horumarin karnaa shirkadeena oo aan sahamin karnaa magaalada annagoo helnay qandaraasyo cusub. Waxaan kaloo furi karnaa baabuur cusub. Waxaa jira 36 baabuur wadar ahaan, in ka badan 60 qandaraasyada dhismaha, dhismaha waddooyinka iyo shaqooyinka dayactirka ciyaarta.
Construction Simulator 2 Noocyada
Cabirka Faylka: 1413.12 MB
Horumar: astragon Entertainment GmbH